विवाहकै दिन बहिनी भनाउँदी नै अर्की श्रीमती बन्न आएपछि...
गुल्मी, असार १३
केही दिनअघि विवाहको दोस्रो दिन बिहान रुपन्देहीको एक होटलमा मृत फेला परेका एक युवाको घटना पछ्याउँदै जाँदा थप रहस्य फेला परेको छ । जेठ २४ गते राति बुटवलको एक होटलमा सुहागरातका रुपमा नवदुलहीसहित बसेका रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ अमुवा हिरागञ्जमा ३२ वर्षीय कर्णबहादुर बुढाथोकी अर्को दिन बिहान सोही होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । उनले झण्डै १५ वर्षदेखि स्थानीय थारु समुदायकी एक युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध राख्दै आएको ती युवतीको दाबी छ । तर बुढाथोकीले आफ्ना साथीहरुमार्फत उनीबाट पन्छिन चाहेको बताइएको छ । गत एक वर्षदेखि उनीसँग टाढिँदै आएको बुढाथोकीलाई गत कात्तिक महिनामा ती युवतीका परिवारजन र आफन्तले जुटाएर मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेका थिए । स्थानीय समाजसेवी तथा उनै बुढाथोकीका मिल्ने साथी कमल भट्टराईका अनुसार बुढाथोकी उक्त महिनाको छलफलमा बाबुको मृत्यु भएको एक वर्ष पूरा नभएकोले छ महिना पछि विवाह गर्छु भनेका थिए । तर जेठ २३ गतेका दिन त्यहाँका वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा बुढाथोकीले ती युवतीलाई विवाह गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि ती युवतीले त्यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षकहाँ पुगेर बुढाथोकीले आफूसँग पटक–पटक गरी छ लाख रुपैयाँ लिएको भन्दै उक्त रकम असुल गरिपाऊँ भनी उजुरी दिएकी थिइन् । पुनः जेठ २४ गते बुढाथोकीलाई एक्लै पारेर जबर्जस्ती विवाह गराएर यस्तो घटना घटेको उनका परिवारजनको आरोप छ । उक्त आरोप झूटो भएको ती युवती र उनका पक्षधरहरुको दाबी छ ।
के भएको थियो त त्यस रात ? :- त्यसरी गाउँबाट श्रीमान् र श्रीमती बनेर बस्ने भन्दै बुढाथोकीले ती युवतीलाई बाइकमा राखेर हाँस्दै र विदाइको हात हल्लाउँदै हिँडेका थिए । बुटवल पुगेपछि सिद्धबाबातिर घुम्न गए । त्यहाँ पुगेपछि एउटी महिलाको फोन आयो । म्यासेजहरु
पनि आउन थाल्यो । उनले विवाह गरेर ल्याएकी उनलाई ढाँट्न चाहेनन् । उनले भनेका थिए, ‘मलाई एउटी महिलाले मेरो छ महिनाको गर्भ रहेको छ भनेर तनाव दिएकी छ । अहिले नै भेट्न आउँछु भनेर फोन गरेकी छ ।’ त्यसपछि उनीहरु साँझ ६ बजेतिर त्यस होटलमा आए । १०८ नम्बर कोठा बुक गरे । उनले कमल भट्टराई लगायतका साथीहरुलाई पनि बोलाए । गोल राउण्ड टेबुलमा बस्ने क्रममा ती युवती नजिक टाँसिदै कालु तनाव नलिनु अब भनिन् । त्यही बेलामा फेरि तिनै महिलाको फोन आयो । पटक पटकको फोनपछि उनी ती महिलालाई लिन जान बाध्य भएर गए । केही बेरपछि होटलको छतमा ती महिला आइन् । उसलाई विवाह गर्छस् भने मलाई पनि स्वीकार गर नत्र यही छतबाट हाम फालेर मर्छु भनेर दबाब दिन थालिन् । अर्की पनि त्यसै गर्न थालिन् । कमल भट्टराईलगायतले ती महिलालाई झपारेर पठाए । त्यसपछि बुढाथोकीले विवाह पार्टीका रुपमा साथीहरुलाई तल लगेर बियर र नास्ता गराए । त्यहाँ हाँसो ठट्टा पनि चल्यो । ती साथीहरु करिब साढे दश बजेतिर त्यहाँबाट हिँडेको होटलवालाको भनाइ छ । उनीहरु दुई जना सोही कोठामा सुत्न गए । बिहान करिब ५ बजेको समयमा सेन्डो मैलो भयो धोइदेऊ त भनेर दिए बुढाथोकीले । करिब ६ बजेतिर साबुनलगायतका सरसमान किन्न पठाए । ढोका नखोलेको देखेपछि दुवै जना तल झरेर होटलवालाई आग्रह गरे । स्टाफले ढोका खोलेपछि ती युवतीबाहिर निस्किइन् । बुढाथोकी माथि कोठामै गए । होटलवालाको शब्दमा २० मिनेटपछि उनी सामानहरु किनेर आइन् । भित्र ढोका हान्दा चुक्कुल लगाएको पाएपछि अत्तालिँदै ती महिला तल चक्कु माग्न आइन् । ढोका खोल्न एक्लै हरप्रयास गरिन् । अन्ततः ढोका खोलेर हेर्दा झुण्डिएको अवस्थामा देखेर उनले काँधमा बोकेर बचाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।
उनै बहिनी थिइन् जो अर्की श्रीमती बनेर आइन् :- बुढाथोकीको विवाहकै दिन अर्की श्रीमती बनेर आउने महिलाको कथा बेग्लै छ । उनका श्रीमान विदेशमा थिए । बुटवल नजिकैको एक सहरमा डेरा गरेर बसेकी उनी गत वर्ष बुटवलको एक अस्पतालमा छोराको उपचार गर्न पुगेकी थिइन् । सोही अस्पतालमा बुढाथोकीका पिता पनि बिरामी परेर भर्ना भएका थिए । जहाँ बुढाथोकी र उनकी दिदीसँग चिनजान भयो । उनले आफ्नै बुबाको रुपमा स्याहारसुसार पनि गरिन् । त्यस अस्पतालबाट रिफर भई घर ल्याएपछि सिकिस्त परेका बुढाथोकीका पिताले ऊ मेरी छोरी नै हो बोलाइदेऊ भनेर बोलाइयो । उनी आइन् । घरको सबै कामदेखि किरिया क्रमको कुनोसम्म पूरै छोरीका रुपमा भूमिका निभाइन् । यहाँसम्म कि उनी मलामी समेत गएकी थिइन् । त्यसपछि पनि आउने जाने घरको सबै काम गर्ने दाजुबहिनी मिलेर गर्ने गरे । जुन दाजुबहिनीको सम्बन्धमाथि उनकी प्रेमीका बनेकी ती थारु सामुदायकी महिलाले आशंका गर्न थालिन् । उनीहरु बढी नै नजिकिन थालेको र आफूसँग टाढिँदै जान थालेपछि उनले ती दुई जनाको हर्कतबारे विदेशमा रहेका उनका श्रीमान्लाई केही कुरासहित तस्बिर पठाइदिइन् । त्यसले उनीहरुबीचको दाम्पत्य जीवनमा असर पु¥याउँदै गयो । त्यही रिस साँधेर बसेकी तिनै बहिनी बनेकी महिला त्यसरी छ महिनाको गर्भसहित श्रीमती बन्न आएकी थिइन् । कमल भट्टराई भन्छन्, ‘कर्णकै आग्रहमा बुटवलमा त्यसको १५ दिनअघि ती महिलालाई भेट गराइएको थियो ।’ त्यस भेटमा बहिनीजस्तो पवित्र नाता जोडेकाहरुले प्रेमी प्रेमिका हौं भन्न लाज लाग्दैन ? भनेर सवाल पनि उठाइयो । त्यति बेला उनले त्यो गर्भ रहेको कुरा बताइनन् । त्यसको १५ दिनपछि जब ती थारु समुदायकी महिलासँग विवाह गरे भन्ने सुनिन्, तब उनी छ महिनाको गर्भ छ श्रीमती स्वीकार गर भन्दै आइन् । यसबाट के देखिन्छ भने आफ्नो श्रीमान्लाई कुरा लगाएर घर बिगारेकी ती थारु समुदायकी युवतीसँग रिस साँध्नु । मेरा बिगारी भने त्यसको घर पनि हुन दिन्न भन्नु । उनलाई त्यसरी उचाल्नुमा कुनै न कुनै तत्व पनि हावी देखिन्छ । यस घटनालाई बुटवल प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको परिवारजनको गुनासो छ ।